China pp chemarata ekudzoka bhokisi ine furemu Mugadziri uye mutengesi | Sihai
Iyo pp mhango furemu bhokisi zvakare inogona kushandiswa mumaindasitiri mazhinji, senge kurongedza, kutumira, bhokisi rekudzoka, storages, imba yekuchengetera, zvigadzirwa zvekutakura zvichingodaro. Iyo pp yakakomberedzwa furemu bhokisi zvakare inogona kunge iri ESD bhokisi uye inoitisa bhokisi, inoshandiswa zvakanyanya mune zvemagetsi, zvigadzirwa zvemagetsi, zvemagetsi zvikamu zvikamu, zvikamu zvefoni uye auto zvikamu zvekutakura uye mutero.
Iyo pp yakagadziriswa tafura yebhokisi zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi inogona kuve yakagadzirirwa kugadzirwa kwakasiyana siyana, saizi, aruminiyamu chiwanikwa chivharo pamucheto, inogona kuvharwa, isina guruva, yakanaka uye nerupo chitarisiko. Iyo pp yakagadziriswa turnover bhokisi iri Isina-chepfu, isina kunaka, hunyoro-chiratidzo, isina mvura, ngura kuramba, kurema uremu, yakasimba, inokwenenzverwa, inoyevedza chitarisiko, rakapfuma ruvara, rakachena, rinogadziriswazve, dziviriro yezvakatipoteredza, hapana kusvibiswa uye mamwe maitiro.
Zvakanakira "bhokisi rekudzoka" rinofanira kunge richizivikanwa nemunhu wese. Iyo inochengetedza zvakatipoteredza, inogara yakasimba, ine hupfumi uye iri nyore. Naizvozvo, bhokisi rekudzoka hariparadzane mune zvigadzirwa zvemunyika yangu nemamwe maindasitiri akakosha. Kune akawanda marudzi ezvigadzirwa zvekugadzira, uye yakajairika ndeye PP mhango. Izvo zvinhu zvebhodhi.
Zvakajairika hollow bhodhi zvigadzirwa zvine zvakanakira isapinda mvura, hunyoro-chiratidzo, anti-ngura, anti-vibration, mwenje uremu, nezvimwe. Chaizvoizvo, hapana zvikanganiso. Kunze kwekunge mutengi achida zvigadzirwa kana mabhokisi anodarika huwandu hunotakura mutoro webhodhi bhodhi turnover bhokisi, zvino zvimwe zvigadzirwa zvakaita se (Plastic turnover mabhokisi, hoarding mabhokisi) nezvimwe zvigadzirwa zvakatsiviwa, asi mutengo waro unoverengeka uyo wemhango mabhodhi. Zvakare, epurasitiki ekudzoka mabhokisi uye kuhodha mabhokisi zvakare ane zvakawanda zvakaipa:
Mapurasitiki ekudzoka mabhokisi anonzi zvakare PP kana PE mabhodhi ekudzoka. Dzinogona kutsemuka kuchamhembe kana nekuda kwetembiricha yakaderera munguva yechando. Kana mukobvu zvinhu zvichishandiswa pakadzika tembiricha kuramba, zvinogona kuwedzera huremu hwebhokisi rese. Kurema kwacho kunoita kuti vashandi vanzwe kuneta mukutakura nekubata, uye mutengo webhokisi uchazodhura mushure mekuwedzera, uye zvakare uchave nekukanganisa kune wese munhu zvido zvehupfumi. Kazhinji kutaura, zvakanakira mapurasitiki ekudzoka mabhokisi anokunda zvisizvo, uye zviri nyore kushandisa. Vanhu vazhinji vachiri kuda kusarudza ekudzoka mabhokisi echinhu ichi.
Pashure: mapeji erudzi rwekuchengetedza keji, pallet mudziyo storages bhokisi
Zvadaro: pp isina mhango bhodhoro rukoko pad
mapeji chemarata correx sikuta bhokisi reDelivery B ...
pp chemarata chengetedzo keji, nhovo mudziyo ST ...